Nyanzvi dzeSemalt Dziratidze Nzira Dzenzira dzeku Ongorora Yako Performance muGoogle Search Console
Uri kuyedza kusvika ku TOP, asi haugone? Vatengi havagone kuwana yako saiti? Wongorora, ongorora uye uwane mhinduro uchishandisa Semalt YEMAHARA webhu analytics zvishandiso. Yedu Keyword Positioning Kutarisa chishandiso chinopa nzvimbo dzenzvimbo pamapeji eGoogle yekutsvaga injini mhinduro uye anoratidza mazwi akakosha ekusimudzira anotariswa.
Tsvaga izvo vanhu vari kutsvaga uye uvaudze zvavanoda. Tarisa uone vatengesi vako, ratidza zvakavanzika zvekubudirira kwavo uye shandisa ruzivo rutsva urwu rwekusimudzira kwepamhepo. Gadzira yakadzama mishumo pane yakagadziriswa zvikanganiso uye yakagadziriswa masenki ekuongororwa paunoda. Iva webhu guru uye uite rombo rine yako saiti.
Shandisa Semalt chishandiso chekutarisa kumiswa kwemazwi akakosha uye iyo Webhu Ongorora kuti utevedze maitiro:
Tarisa uone saiti yako
Vhura iyo kuoneka kwayo paWebhu
Ongorora nzvimbo dzinokwikwidza
Ziva zvekukanganisa mashoma pane peji
Gamuchira yakatsanangurwa webhu zvinzvimbo zvirevo
Webhu yedu analytics inyanzvi yekuongorora maturusi e webmasters anovhura musuwo kumikana mitsva yekutarisa musika, zvigaro zvako uye izvo zvevanokwikwidza vako pamwe zvinonzwisisika bhizinesi analytics.
Kudzora kwenzvimbo dzako saiti
Kuwana chinzvimbo chakakodzera muGoogle chava nzvimbo yekurwira yekushambadzira kwepamhepo. Apa ndipo apo chikamu chikuru chehurongwa hwako hwepamhepo chinofanira kutungamirirwa. Izvo, saka, zvakakosha kuti uongorore kufambira mberi kwako kana kutadza kwako.
Iyo inokutendera iwe kuti uwane mufananidzo wakazara wekuti iyo kambani yako imire mumusika. Iyi data yekuongorora inobetsera iwe kujekesa iwo akakosha ezvinyorwa mune basa rako ramangwana: zadza saiti yako nezvakarongedzwa zvichienderana nemazwi akakosha mazwi, tenga / kuchinjanisa zvigadziro zvinoenderana namashoko anoenderana, nezvimwe.
Dzora zvinzvimbo zvevanokwikwidza vako
Kunyatsotsvaga uye kuongororwa kwevanokwikwidza vako zvinhu zvakakosha pazvinhu zvekuongororwa kwemusika. Kuongorora kukwikwidza kunokubvumira kuti uongorore simba uye kushaya simba kweanokwikwidza mumusika wako uye kuita zvirongwa zvinoshanda zvekuvandudza mukana wako wemakwikwi.
Semalt ichakutungamira kuburikidza ne-nhanho-nhanho nhanho yekukwikwidza kuongororwa, ichikubatsira kuona vakwikwidzi vako, kuona uye kuyera hunhu hwavo, kuongorora masimba avo uye kushaya simba, uye kuwana zvinangwa zvavo nemano avo muchikamu chako chemusika.
Semalt Analytics icharatidza zvese nhoroondo kuti vanokwikwidza vamire pamusika. Kushandisa ruzivo urwu zvinobudirira kunokubvumidza iwe kuti unakidze mukutsvaga injini yekuvandudza, kukurudzira uye kushambadzira kushambadzira.
Kuwanikwa kwemisika mitsva
Kuve negwara rakasimba rekutenga vatengi uye kuwanikwa kwemisika mitsva chinhu chakakosha kune chero kambani. Pasina iyo, iwe uchave nenguva yakaoma yekukura bhizinesi rako nenzira ine chinangwa. Zvikanzi, imwe yezvinonyanya kunetsa zvikamu zvekukwira bhizinesi ndeyekutarisisa yakanyanya kunaka nzira yekukwezva misika mitsva.
Ruzivo rwunowanikwa kubva mukuongororwa kwebhizinesi rako runopa mikana mitsva yekugoverwa kwezvinhu nemasevhisi uye mukusimudzira chinyorwa chako munyika dzakatarwa, nekudaro zvichikurudzira kambani yako kuti ifunge nezvezvinoenderana nematunhu, nezvimwe.
Shanduko yedata kuPDF uye Excel
Kukosha kweiri basa hakugone kuderedzwa parizvino kunevatengi uye manejimendi. Iwe une mukana wakasarudzika wekugadzira chena-label mishumo uye unovaratidza kune vechitatu mapato pasi pechinyorwa chako.
Semalt analytics inosanganisira
Isu tinokubatsira kusarudza mazwi akakodzera kwazvo ekutengesa.
Hapasisina kudiwa kwechinhu chakakosha pakutsvaga chinyorwa. Tora makwikwi ako makuru emakwikwi, ruzivo rwakadzika paPPC uye SEO, Google data uye yedu yekutsvaga tekinoroji. Zvese iwe zvunofanirwa kuita ndiko kusiira manejimendi kune Semalt nyanzvi.
Fungidzira uye uone chimiro chemashoko ako akakosha zvinoenderana nenguva. Keyword chinzvimbo kuongororwa inzira yekutsvagisa pamwe nekuongorora yechokwadi yekutsvaga mazwi ayo vanoshandisa Internet vanopinda mune yekutsvaga injini.
Ruzivo rwaunowana pamusoro peaya echokwadi mazwi ekutsvaga anogona kubatsira kuzivisa yako yekuronga maitiro, pamwe neyako yakajeka nzira yekushambadzira.
Nei kukosha kwemashoko kutsvakisisa kuchikosha?
Zvakawanda uye zvakawandisa, tinonzwa kuti SEO rakashanduka sei mumakore gumi apfuura, uye sei makiyi ivo pachavo vava kugona kwedu kuoneka mushe mukutsvaga kunoitwa nevanhu zuva nezuva.
Kuongorora kwezuva nezuva kwewebsite nzvimbo pane injini yekutsvaga system.
Tsvagiridzo uye kuongororwa kwevanokwikwidza 'injini yekutsvaga inomira.
Kudzora kwemhando yako
Mufananidzo weako mhando wakakosha, sezvo makumi manomwe neshanu muzana remafungiro achazotsvaga iwe wakasununguka kunze.
Izwi rinotyisa kune pfungwa yakapusa. Chigadzirwa chako ndicho chimiro chekambani yako. Tamba nayo, uye vanhu vanogona kunetseka kukuziva. Chengeta ichi chichienderana, uye munguva pfupi iwe uchavaka mukurumbira wakanaka.
Uye kudzora kuzivikanwa kwako kwekambani hakuna kunaka chete kune vatengi vako. Kuitwa mushe, kutonga kwema brand kunogona kukuchengetera nguva yakawanda, usingatauri kunetseka.
Ruzivo rwekuongorora runoratidza ako mukurumbira chiyero, kukubvumidza iwe kuvaka nyanzvi yekudyidzana musimboti.
Kuongorora kwakazara kwekutevera kwewebsite yako nekuvandudza kwesaiti uye SEO indasitiri zvido.
Online SEO Audit | SEO Ongororo
Zvinjini zvinotsvaga zvinoshandisa zvinoverengeka kuwanda webhusaiti. Iyo Webhusaiti Webhusaiti ndeyenyanzvi yekuongorora yeSEO inoongorora izvi zvinhu nezvimwe. Iyo inobatsira iwe kuwana matambudziko anogona kunge ari kutadzisa yako saiti mamiriro. Nekuita yakatsanangurwa SEO saiti yekuongorora, chishandiso chedu chinopa iwe zvakakwana nezvesaiti yako SEO data, seMeta tag, kuongororwa kweGoogle SERP, sitemaps, Robots.txt uye zvimwe zvakawanda zvakakosha manhamba.
Webhusaiti Yekutariswa Kwemotokari | Webhu YeTraffic Checker
Muchikamu chino chewebhusaiti yekuongorora webhusaiti, unogona kuita kuongororwa kwakazara kwewebsite traffic uye uwane mamiriro epasirese webhusaiti yako. Zvese izvi nezvakakosha matanho senge chiyero chekurumwa chewebsite yako. Iwe unogona kushandisa aya matanho e data kuronga yako webhusaiti matanho mberi.
Mushure mekunyoresa pane yedu saiti, iwe unotanga iyo yekuongororwa data kuunganidza maitiro uye unogashira rondedzero yakanangwa pazvinzvimbo zvewebsite yako uye izvo zvevanokwikwidza vako, uyezve pane yako saiti kuenderana nekuvakwa kwewebsite uye SEO indasitiri zviyero. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine account, unogona kugara uchiwedzera chirongwa (webhusaiti) kune yako pachako nzvimbo, uye zvakare ichaongororwa nehurongwa.
Munguva yekuongororwa kwewebsite yako, yedu system inofunga mazwi makuru anogadzira kutengesa uye kushanya zvichibva pane zviri mukati uye meta zita = '' mazwi makuru '' data rakawanikwa kubva pakuongororwa kwewebsite yako. Iwe unogona kuwedzera ako ega mazwi kana kubvisa mazwi aripo chero nguva.
Yenzvimbo yega yega yedzinzvimbo inobvumidza kutsvaga kwepamhepo mumutauro waunosarudza inowiridzwa neinosvika mazana matatu nemasere yekutsvaga kweGoogle. Yese injini idzi dzinomiririra kuwanda kwenzvimbo yako muSemalt.
Ndokusaka Semalt inopa zano kuti ishandise injini dzinoverengeka dzekutsvaga nzvimbo yako. Iwe unogona kusarudza akawanda emjini yekutsvaga yewebhu webhusaiti sezvaunoda.
Mazuva ese, tinoongorora zvinzvimbo zvesaiti uye tevera kufambira kwavo. Uye zvakare, isu tinounganidza ruzivo nezve vakwikwidzi vako (kana iwe ukafunga kuongorora masaiti avo).
Kusiyana nedzimwe nzvimbo, isu tinogara tichigadzirisa zvinzvimbo zvako, izvo zvinokupa mukana wakasarudzika wekutarisa zvinzvimbo zvewebsite online chero nguva yezuva uye ona shanduko dzazvino.
Iwe unogashira akawanda mafirita ayo anozoita kuti basa rako ne data rireruke uye kuti ubatsire kuita sarudzo dzekubudirira kwamapurojekiti ako.
Iwe unogona kuisa mazita ako pasi kuti uone iyo chaiyo chikamu chebhizinesi rako uye utore zvinyorwa zvinobatsira zvinoratidzwa mune infographic chishandiso uye chakabatanidzwa kune yakatarwa zuva.
Iwe unogona zvakare kushandisa iyo API system. Ikozvino kune nzira dzinoverengeka dzekuendesa ruzivo. Iyo module pane yechitatu-bato sosi ndiyo yakanyanya kupfuura yavo. Iyo yekupedzisira inonyanya nyore nekuti iyo data inofananidzwa otomatiki, zvichibvumira vashandisi kuona ruzivo rwakagadziriswa. Hapana kuedza kunodiwa pane yako chikamu. Iwe unogona kugara uchitarisa kumusoro-kwe-zuva data yekuongorora kubva kune chero yakasarudzwa sosi.
Zvese ongororo zvinounzwa kwauri mune yakadzama analytical mushumo inoshandurwa kuPDP kana CSV (White Label & Semalt Label) chimiro iwe chaunotora kubva webhusaiti yedu.
Iyo mishumo inogona kutumira zvakare kune e-mail kero inoratidzwa, zvichienderana neyakasarudzwa frequency. Izvi zvinogona zvirinani kutendeukira kune yako pachedu maonero uye kuendesa masimba ezvekufambira mberi kwako kune wechitatu bato.
Wako maneja maneja ane basa rekutarisa mafambiro ako uye rinowanikwa rekubvunza kana mibvunzo chero nguva. Iwe unogona kubata timu yedu pazviri nyore kwauri.
NB: Kana iwe ukamisa kukwidziridzwa kweSEO, ese backlink anozobviswa, uye Google ichavabvisa kubva mudura rayo mumwedzi mishoma. Kunyangwe kana zviyero zvawakawana panguva yeHOSE mushandirapamwe zvadzikira zvishoma, ivo vachiri kunge vakakwira kupfuura zvawakange wakamboita.
Kana iwe wakambove uine webhusaiti kana kushanda webhusaiti, iwe unofanirwa kuziva zvakanyanya izwi rekuti Kutsvaga Injini Yekushandisa (SEO) uye zvakare wanzwa / kushandisa imwe yeZvinhu zve SEO. SEO inosanganisirana neGoogle marobhoti anouya kune yako saiti uye achikamba nayo kuti indexing. Uye zvichienderana neayo algorithms, kana Google ichiwana yako data yakanyatso uye yakagadzirirwa zvakakwana, webhusaiti yako ichakurumidza kukwirira kuGoogle. Heano mashandisiro aunoita webhusaiti yeGoogle.
Vanokambaira vanoongorora zviri pawebhusaiti yako uye vanorekodha dhata mune yavo dhata uye chinzvimbo chewebsite mushure mekuchiongorora.
Ivo vanoshandisa SEO kuti vaone kuti yakawanda sei yewebhu traffic iwe yauchawana uye chii iyo saiti kana peji peji iri. Ichi chikonzero nei zvakanyanya kukosha kuti uongorore SEO yako. Uye izvi ndizvo zvinoshandiswa newewekuongorora webhusaiti kuita.